शिवको वाहन नन्दीबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ ? | ड्रूपल
शेखर कपूर: मलाई थाहा भएअनुसार नन्दी शिवका बहान हो । के ऊ यसकारण पर्खिरहेका छ कि शिव बाहिर आएर केही भन्नुहुनेछ...? नन्दीको बारेमा केही बताउनुहोस् ।
बाहिर यत्तिकै बसिरहेको नन्दीले तपाईंलाई यो बताइरहेको छ कि "मन्दिरभित्र गएर अनेक किसिमका उट्पट्याङ नगर्नुहोस् । कुनै चिजको लागि प्रार्थना नगर्नुहोस् । भित्र गएर म जसरी यत्तिकै बस्नुहोस् ।"
नन्दी शिवका सबैभन्दा नजिकको साथी हो, किनभने उसमा ग्रहणशीलताको गुण हुन्छ । मन्दिरभित्र जानुअघि तपाईंमा नन्दीको गुण हुनुपर्छ, ताकि तपाईं बसिरहन सक्नुहोस् । त्यस अवस्थामा, तपाईं स्वर्गमा पुग्ने कोसिस गरिरहनु भएको हुँदैन, तपाईं यो वा त्यो पाउने प्रयास गरिरहनु भएको हुँदैन— तपाईं भित्र गएर यत्तिकै चूपचाप बस्नुहुन्छ । बाहिर यत्तिकै बसिरहेको नन्दीले तपाईंलाई यो बताइरहेको छ कि "मन्दिरभित्र गएर अनेक किसिमका उट्पट्याङ नगर्नुहोस् । कुनै चिजको लागि प्रार्थना नगर्नुहोस् । भित्र गएर म जसरी यत्तिकै बस्नुहोस् ।"
जब तपाईंमा सचेत रूपमा "म अस्तित्वको अंश हुँ" भन्ने कुरा बोध हुन्छ, तपाईं ध्यानमा मग्न रहनुहुन्छ । नन्दी यसैको प्रतीक हो ।
यदि तपाईंले आफ्नोतर्फबाट केही नगरिकनै पर्खिरहनु भयो भने, अस्तित्वले आफ्नो काम गर्दछ । मूलत: ध्यान भनेको के हो भने, व्यक्तिले केही गरिरहेको हुँदैन— ऊ उपस्थित मात्रै रहन्छ । जब तपाईंको उपस्थिति मात्र रहन्छ, तपाईं अस्तित्वको विशाल आयामप्रति जागरूक बन्नुहुन्छ, जुन सदैव सक्रिय रहेको हुन्छ । त्यसबेला, तपाईं पनि यही अस्तित्वकै अंश हो भन्नेप्रति सचेत बन्नूहुन्छ । अहिले पनि त्यो सत्य हो । तर, जब तपाईंमा सचेत रूपमा "म अस्तित्वको अंश हुँ" भन्ने कुरा बोध हुन्छ, तपाईं ध्यानमा मग्न रहनुहुन्छ । नन्दी यसैको प्रतीक हो । ऊ सबैलाई यही स्मरण गराउँछ कि, "तिमी म जसरी बस्नुपर्छ ।"
ध्यानलिङ्गमा अवस्थित नन्दी
अहिलेसम्मकै अद्‌भुत महाकाव्यको सार्थकतालाई हाम्रो जीवनसँग जोड्दै, सद्‌गुरुले महाभारत आरम्भ गर्नुभएको छ । यस अध्यायमा पाण्डव र कौरवहरूका पूर्वजको जन्मक…